Dimitar Berbatov Oo Saadaaliyey FINALKA FA Cup – Midkee Ayuu Koobka Siiyey Arsenal Iyo Chelsea? – Laacibnet.net
Dimitar Berbatov Oo Saadaaliyey FINALKA FA Cup – Midkee Ayuu Koobka Siiyey Arsenal Iyo Chelsea?
Weeraryahankii hore ee Manchester United iyo Tottenham ee Dimitar Berbatov ayaa saadaaliyey finalka FA Cup ee ay Sabtida maanta isku haleelayaan Arsenal iyo Chelsea, waxaanu tilmaamay in labada kooxood ay ciyaar isku dhow iyo natiijo aan kala fogeyn la iman doonaan.
Inkasta oo Chelsea ay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League ku dhamaysatay, Arsenal na u ahayd xilli ciyaareed xun oo ay rajo la’aan ka yihiin tartamada Yurub, haddana Dimitar Berbatov waxa uu ku dooday in labada kooxood ay isku dhow yihiin oo aanay goolal badan kala dhalin doonin.
Arsenal oo ka guulo badan Chelsea tartanka FA Cup, ayaa u dagaallamaysa in markii 14aad ay ku guuleysato, waxaana intaas u dheer, in haddii ay ku guuleystaan koobka ay si toos ah uga qayb-geli doonaan tartanka Europa League ee xili ciyaareedka dambe, isla markaana ay heli doonaan dhaqaale ay suuqa kaga adeegan karaan.
Sidaas oo kale, Chelsea waxay heli doontaa lacag ay kusii dardar geliso shaqada ay ka waddo suuqa iibka oo ay hore ugala soo saxeexatay Timo Werner iyo Hakim Ziyech.
Arsenal waxay wareeggii semi-finalka 2-0 kusoo garaacday Manchester City oo ay soo qab-jabisay, halka Chelsea ay ciyaar uu qaladaad badan sameeyey David de Gea 3-1 kusoo dhaaftay Manchester United.
Dimitar Berbatov oo saadaaliyey kulankan, waxa uu ciyaaray in ciyaartu ku dhamaan doonto barbarro 1-1 ah, kaddibna la geli doono rikoodheyaal koobka lagu kala qaadi doono.
“Way adag tahay in la saadaaliyo sida uu noqon doono Finalka FA Cup. Koox kasta oo ku guuleysata, waxa uu noqon doonaa koobkii ugu horreeyey ee tababare kastaa uu hanto. Si kasta oo uu koobku ahaadaba, waxay u noqonaysaa dareen cajiib ah.” Ayuu yidhi Dimitar Berbatov oo hadlayay ka hor intii aanu saadaashiisa samaynin.
“Aniga waxay ila tahay in labada kooxood isku mid noqonayaan. Arsenal waxay u baahanaysaa inay taxadarto maadaama ay difaaceedu qaladaad xunxun sameeyaan. Haddii ay wax qalad ah sameeyaan, Chelsea way ka faa’iidaysan doontaa. Waxaad u baahan tihiin inaad hamuunta koobka muujiyaan, iskana ilowdaan wixii aad hore ugu soo guuleysateen.” Ayuu raaciyey Dimitar Berbatov oo la hadlayay Arsenal.
Dimitar Berbatov waxa uu sheegay in ciyaartu ay rikoodheyaal gaadhi doonto, halkaas marka ay maraysana uu aad u neceb yahay in xataa uu daawado ama uu saadaal ka bixiyo, sidaas darteedna aanu saadaalinayn rikoodheyaasha.
Nio nin weyn bu ilaahey ka dhigay waxaad noola imaatay bal eeg, ciwaanka waxey eheed inaad tidhaahdo Berbatov oo saadalin warder ah kabixiyey Finalka caawa dee
Meesha wareer baan kawadaa